Ugu wanaagsan ee kaadhka xusuusta kabashada xogta software
Mararka ay tahay mid aad u adag, waayo, user ay u soo ceshano xogta SIM card kaas oo inta badan ka mid ah xiriirrada iyo fariimaha qoraalka ah ee. Tutorial ayaa loo soo saaray si loo hubiyo in barnaamijyada ugu fiican ee aan la soo bandhigay oo keliya laakiin user sidoo kale helo knowhow ee iyaga oo isticmaalaya. Waxa aan ka dhigi doono oo keliya nolosha u fududahay user, laakiin sidoo kale ballaarin doonto jid toosan.
Files Irrecoverable ka SIM
Waa in la ogaadaa in hababka dhaqanka laguma dabbaqi karo si loo hubiyo in xogta SIM ayaa waxaa soo baxey oo ay u sabab tahay xaqiiqda ah in xogta gal dusha xiran yahay iyo user wuxuu u baahan yahay in la hubiyo in ay biilasha dheeraad ah oo ku barnaamijyada software waxaa loo isticmaalaa dib u soo ceshano xogta. Waxaa sidoo kale in la xuso in wax kaqabashada toos ah ka SIM marna waa suurto gal ah iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la isticmaalo habab in lagu macnayn lahaa ee qaybtii dambe ee tutorial ah si loo hubiyo in arrinta weli ma kulan user. The utilities in lagu macnayn lahaa in tutorial this sidoo kale hubin doona in faylka irrecoverable ka SIM looma samayn recoverable oo kaliya balse xogta ay sidoo kale soo saaro habka ugu wanaagsan si user helo natiijada ugu wanaagsan wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user in ay raacaan dhammaan tallaabooyinka lagu xusay in tutorial sida ay iyaga la kaxayn doonaa xalka hab degan oo wanaagsan iyo enchanting keenaya user si aad u hesho natiijooyinka waafaqsan shuruudaha. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in talaabooyinka ay yihiin marnaba laga booday ama la soo kabashada kale file ka SIM waxay noqon doontaa shaqo aad u adag tahay in la oofiyo sameeyo.
Kabsado xogta aad la SIM kabashada xogta ugu wanaagsan ee software
Wondershare Dr. Fone u Android waa mid ka mid ah barnaamijyada software aad u caqli badan oo dhalaalayay in la horumariyo by Wondershare si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo oo user helo xogta nooc kasta baxey markii waynay. In Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waa in sidoo kale lagu xusay in barnaamijka la casriyeeyay si ay u daboolaan baahida iyo baahida oo ka mid ah dadka isticmaala in ay yihiin kac leh maalin kasta marayay. Faahfaahin buuxda oo ku saabsan barnaamijka waxaa sidoo kale ku xusan ee Wondershare website-ka rasmiga ah iyo user wuxuu iyada soo booqan kartaa si aad u hubiso in macluumaadka dheeraadka ah ayaa loo soo ururiyey. Waxa kale oo xusid mudan in uu jiro liis aad u dheer oo ka mid ah telefoonada gacanta in la Xuso website-ka oo kuwanu waa telefoonada in waxaa taageera barnaamijka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in barnaamijka uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu hufan oo wax ku ool ah ee la heli karo ee suuqa.
Geedi socodka la xidhiidha inuu ka soo kabsado xogta SIM (oo sida caadiga ah waa SMS ama xiriirada) kabashada ayaa hoos ku xusan si aad u hubiso in user helo natiijada ugu wanaagsan oo la raaci karaan hanaanka si loo hubiyo in shuruudaha user ayaa waxaa sidoo kale la kulmay:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-guide.html waa in la adeegsadaa si loo hubiyo in file exe barnaamijka la soo bixi:
2. Haddaba qalabka android user ay u baahan tahay in la hubiyo in jidka oo uu soo hoos ku xusan waxaa la socda in la helo geeddi-socodka socday:
Settings "> guji" Codsiyada "> guji" Development "> hubiyo" debugging USB
Stage 3. Aaladda falanqeeyaan ka dibna la bilaabi doonaa sida horumarinta ah:
4. nooca file waa in la soo xulay. Sida SIM loo isticmaalay in lagu soo ceshano xogta si nooca fariin qoraal ah laga soo xuli doono in la sii wado,
5. user ayaa markaas u baahan yahay in la qeexo hab iskaanka u soo kabashada xogta iyo halkan waxa ay ku saabsan doorashada ee user. Ujeedadu waxay tahay in ay tahay in la ogaadaa waa in hab sare loo arki karaa baaritaan qoto dheer oo ay qaadato wakhti ka sii dheer oo ka dhigaysa user waxay sugi in ka badan marka la barbar dhigo hab caadiga ah oo uu soo gundhig:
6. Nidaamka dib u soo ceshano doonaa dhamaan xogta ee SMS ka SIM iyo sidoo kale telefoonka mobile si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo:
7. user ayaa haatan u baahan yahay si loo hubiyo in farriinta ah in ay tahay in la soo kabsaday ayaa la riixi ama hubiyaa iyo kuwa kale waxaa laga qaban. Sida ugu dhakhsaha badan badhanka soo kabsadaan ka dibna la sii adkeeyey software inay hubiyaan in dhammaan fariimaha qoraalka ah kuwa la hubiyaa waxaa lagu soo kabsaday waxaana ay tani sidoo kale ka baxayo geedi socodka buuxda ka dhigi doonaa.
Waa maxay walax waxaa ku kaydsan SIM-?
SIM u taagan tahay module aqoonsiga macmiilka iyo sabab la mid ah ay tahay sida ugu fiican iyo technology ugu horumarsan GSM in la soo saaro. Waxay ka dhigaysa hubiyo in xogta la baxey ma aha oo kaliya ka BTS dhow, laakiin calaamadaha ay sidoo kale si joogto ah si toos ah xagga mobile macmiilka ee. Alaabtayda oo ah in lagu kaydiyaa kaadhka SIM ku xiran tahay doorashada side ama fursadaha in la siiyay user ee arrintan la xiriira. Inta badan dadka ka shaqeeya gacanta in ay ka shaqeeyaan adduunka oo dhan in la hubiyo in ay xiriir default iyo SMS ku kaydsan yihiin in SIM iyo waa sabab ka mid ah in habka kor ku xusan ee wax kaqabashada SMS ayaa waxaa lagu sharaxayaa isticmaalaya Dr. Wondershare ka Fone u Android .
Waa maxay nooca xogta ha aad rabto in aad dib u soo ceshano ka SIM card?
Sida ayaa lagu sharxay ka hor iyo weliba in labada nooc ee xogta lagu kaydiyaa kaadhka SIM waa xiriir ah iyo sidoo kale SMS iyo labadoodaba waa mid aad muhiim u ah user markuu u yimid in ay wax kaqabashada xogta. Haddii codbixin la sameeyay arrintan la xiriira ka dibna ay natiijada noqon doono 100% isticmaala leh SMS iyo 100% oo ka mid ah leh xiriiro. Sidaa darteed poll tani waa si siman Nicmada xogta oo uu soo sheegnay.
> Resource > Memory Card > ugu wanaagsan ee SIM-kabashada xogta software